Talisyada Ciidanka dagmada Caabudwaaq oo la mideeyay+Sawirro – Bandhiga
Talisyada Ciidanka dagmada Caabudwaaq oo la mideeyay+Sawirro
Saldhigga dagmada Caabudwaaq ee gobalka Galgaduud waxaa lagu qabtay maanta munaasabad lagu mideynayay ciidamada xasilinta waqooyiga gobalka Galgaduud sida ciidanka booliska iyo kuwa Milteriga, waxaana loo sameeyay hal talis oo leh taliye iyo taliye ku xigeen.
Waxaana Munaasabadan ka soo qeyb galay mas’uuliyiinta dagmada Caabudwaaq iyo qeybaha kala duwan ee Shacabka kuwaa oo si iskumid ah u soo dhaweeyay taliska mideysan ee la sameeyay.
Gudoomiyaha dagmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qorshan uu muddo socday waxaana uu codsaday in ciidamada lagala shaqeeyo sugidda Amniga.
Taliyaha ciidamada Qeybta 21-aad Cabdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysa oo amniga ku saabsan ayaa sheegay in Taliyaha ciidamada xasilinta loo magacaabay Dhame Maxamed Yuusuf oo katirsan ciidanka Militeriga halka ku xigeenkiisa loo magaacaby Axmad Cabdullahi oo katirsan ciidamada Nabad Sugidda.
Waxaana uu sheegay in ciidanka loo mideeyay sidii loo caawin lahaa maamulka dagmada Caabudwaaq waxaana uu dalbaday in meesha laga saaro nin jecleysiga iyo qabiilka, si gacanta loogu dhigo cid walba oo amniga halis ku ah.